Ukumisela siqithi ishushu wangena zegumbi pa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukumisela siqithi ishushu wangena zegumbi pa
In nesendlu pa, umashini pa yimveliso. Lilungiselelo pa zegumbi onobuhle, ngokubhekiselele amanye amashishini, kuya kuba njalo njengoko uyawubonakalisa iimpahla. Kwi pa parlour, shima ufuna ukuthatha imodeli esiqithini ingeniso ezinzileyo ezinzulu kwi bonisa kuma ngokusebenza ukuba ufuna ukuziveza, kananjalo kukho izinto ezininzi ukutshintsha ukubekwa kunye nokufunyanwa ngokupheleleyo siqithi.
kuxhomekeke enoba nenze naziphi na singangumzekelo nasiphi na isiqithi, siyazi amehlo Injongo yale modeli kwi pa parlour. Model, yona na indawo ekufutshane
port kakhulu ngaphambili, nangenxa imodeli ibhilibhodi kunye Xintai iivenkile ezininzi, idla nomzekelo ukuba ufuna ukwamkela umsebenzi ozinzileyo. Ngenxa yokuba kwakhona esitalini hlengiso isikhonkwane kunye Horukon amisiweyo, njani ezilungileyo, kususela zenzeka esiqithini apho, ukuba iyasebenza, ndicinga ukuba Atsuishima ekhethekileyo.
evenkileni, inkoliso Atsuishima akuyonto imifuziselo umqondiso Xintai, elinamalungelo afanayo nalawo-Xintai kunye, sisiqithi iqhele ngowona mzekelo, osuke ethandwayo.
yiyo kwakhona rhoqo kusetyenziswa lo mcimbi, kodwa kukho kwakhona inzuzo ukuba akanakufane Gase isiganeko kuthelekiswa imodeli ezincinane. Ethetha nokuba imodeli enjalo obekwe kakuhle nasiphi na isiqithi, okanye umnyango emva evenkileni, ikufuphi embindini evenkileni. Kwimeko apho
siqithi ngokujonga izityalo ashushu, nceda uzame ukuze bakuthathele ingqalelo. emnyango Back, eyenza kube lula ukusebenza nokuba ukufumana indawo efanelekileyo eqhotyoshelwe emehlweni akho. Ezivenkileni kufuphi embindini, kude kube Kumbindi abathengi evenkileni, siya abekwe ukuza draw.
Ngokufutshane, indlela ukuthi sele ifakiwe kule ndawo, kukuba ntonje singangumzekelo abe lomboniso kuma evenkileni. Ukuza kuthi ga ngoku, ngokomlinganiselo, kusenokwenzeka ukuba senziwe siganeko imodeli, oko kudla uhlengahlengiso isikhonkwane kwakhona ugcine isikhonkwane eqhelekileyo.
Kwaye siqithi Ekubeni, ngoko nkqu intsebenziswano engcono nendalo, yibani ukuhlangabezana ngokukhawuleza le hit okuba enkulu, naye uya kuba loo nto idla kunokubangela okuwisa lugwayimbo. Sikholisa ukuba efihliweyo zikholisa asayine umfuziselo Xintai, kodwa iqondo elithile lozinzo Apho kuba, enyanisweni, ndicinga ukuba injongo lula siqithi phakathi pa parlour.
yolu xesha ukwazisa, uya kuba selungiselelo kwisiqithi jikelele, isiqithi imifuziselo lungiselelo, nokuba ngokuya ukuba loluphi uhlobo lweshishini, into iyahluka kakhulu pa parlour nganye. Kwisiqithi iinxalenye zibonakale ukusuka emnyango, kukho kwakhona elibe pa eze ukubeka zonke imodeli iliso injongo. Ngu izinga imali
, kukho kwakhona elibe pa, njl ukuba akwenzi kwisiqithi enjalo. Kwimeko ireyithi asindiswe pa eliphezulu egumbini, ngokuba wachacha imali elikhulu lemali kufuneka ukuba, kuba nzima ukuba limnandi ngaphezu imifuziselo mqondiso.
nokuba ezinomlinganiselo ukuguqulwa eziphakamileyo, kwimveliso kunye yokuthengisa, nesendlu pa elungileyo, kusenokubakho kwisiqithi enjalo. Pa onendawo ukuguquka ratio kuni, kwimeko ngaphantsi kwe-3 yen, kufuneka kusoloko iintshinga zilungiswe imodeli ejoliswe lokuqala komthunzi.
Ndaya evenkileni, Kuqala kwinto zonke, zama ukuqinisekisa siqithi kufuphi nombindi kwisiqithi isiqinisekiso kunye ucango emva kufutshane kunye neevenkile onobuhle ebhodini. Okumangalisayo zijolise Kusenokubakho yesiqithi zicwangciswe umzekelo. Kufanele.
Ndaya evenkileni, Kuqala kwinto zonke, zama ukuqinisekisa siqithi kufuphi nombindi kwisiqithi isiqinisekiso kunye ucango emva kufutshane kunye neevenkile onobuhle ebhodini. Okumangalisayo zijolise Kusenokubakho yesiqithi zicwangciswe umzekelo.